Fanapoizinana ara-tsakafo Arahina maso ireo hani-masaka amidy
Roa andro tsy hahatongavan`ny fetim-pirenena, dia isan`ireo arahina maso manokana raha ny fanazavana ny eo anivon`ny minisiteran`ny fahasalamana,
ireo sakafo amidy entina misoroka ny fanapoizinana ara-tsakafo. Maro ireo fenitra tokony harahina hisorohana ireo fanapoizinana ara-tsakafo. Tsy ireo mpivarotra sakafo irery ihany no tokony hitandrina fa ireo mahandro sakafo any an-tonkatrano ihany koa. Tsy sarotra fantarina ny trangan`ny fanapoizinana ara-tsakafo raha ny fanazavana teo anivon`ny minisitera. Ao ny aretin-kibo, mandoa ilay olona… Rehefa mitranga izany, mila manatona mpitsabo haingana. Amin`ny ankapobeny, ny 80%-n`ny fanapoizinana ara-tsakafo dia vokatry ny sakafo misy “mayonnaise”. Ankoatraa izay, maro ireo fepetra momba ny fahadiovana no tokony harahina.